Horyaalka Waxbarashada Wakiilada Socdaalka: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Horyaalka Waxbarashada Wakiilada Socdaalka: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dalxiiska • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Gordy Silverman wuu dhintay
Gordy Silverman, Agaasime Sare ee Waxbarshada Warshadaha ee Unique Vacations Inc. (UVI) iyo u doodaha waqtiga dheer ee waxbarashada wakiilka safarka oo ka caawiyay horumarinta barnaamijka Sandals Resorts saxiixa Certified Sandals Specialist (CSS), wuxuu dhintay 24-kii July kadib dagaal kooban oo kansar ah. Waxay ahayd 64.
Silverman wuxuu ahaa horyaal aad loogu riyaaqo wakiilada safarka, isagoo ku biiraya Unique Vacations Inc., oo ah Snadals Resorts iyo Xeebaha Dalxiisyada Xeebaha, 1987.
Waxay durba noqotay joogitaanka Xeebta Galbeed ee UVI.
U hibeynta Gordy ee shirkadda iyo aqoonta warshadaha safarka ayaa gacan ka geystay guusha UVI.
Silverman waxay ku biirtay Unique Vacations Inc. (UVI), oo gacansaar la leh wakiilka adduunka ee Sandals Resorts iyo Xeebaha Dalxiisyada sanadkii 1987, sida uu qabo Ku Xigeenka Madaxa Sare ee UVI ee Xiriirka Iibinta & Warshadaha Gary Sadler oo si deg deg ah isu taagay inay tahay horyaal aad loogu riyaaqo wakiilada safarka. Waxay ka bilaabatay xafiiska Miami ee UVI laakiin markii dambe waxay bilowday joogitaanka UVI ee West Coast. “Muddo dheer oo uu Gordy u hibeeyay shirkadda iyo aqoonta uu u leeyahay safarka safarka ayaa qayb muhiim ah ka qaatay guusheena. Si weyn ayaa loo tabi doonaa, ayuu yidhi Sadler.
Wuxuu intaas ku daray, “Gordy si fudud ayaa loogu tilmaami karaa inuu yahay 'hooyada dhammaan tababarayaasha' xagga safarka. Waxay si toos ah ugu lug lahayd dhinac kasta oo ka mid ah tababbarka iibka ee shirkadeena laga soo bilaabo BDM-yada cusub ee la shaqaaleysiiyay ilaa warshadaha safarka ee ballaaran. Gordy wuxuu si guul leh u horumariyay una bilaabay shahaadadeena kabahaaga Barnaamijka takhasuska. In ka badan 25 sano, waxay xoog ku kaxeynaysay aqoon isweydaarsiga CSS, iyada oo fariimaha iibinta iyo tababbarka u cusbooneysiineysay la taliyayaasha safarka sanad iyo sannadka. Waxay sidoo kale fikrad ka dhigtay 'heshiisyadeenna' caanka ah, dhacdooyinka xog-ogaalka ah ee madaddaalada ah ee sida tooska ah u tababbaray tobanaan kun oo la-taliyeyaal safar ah iyo la-hawlgalayaasha warshadaha ee Waqooyiga Ameerika iyo adduunka Sandals & Xeebaha DalxiisyadaSi fudud, Gordy wuxuu dhisay qaabdhismeedka iyo aasaaska tababarka iibka caalamiga ah ee Unique Vacations oo aniga iyo kooxduba aan maanta si sharaf leh u dul taaganahay. Taas awgeed, dhammaanteen waxaan ku jirnaa daa'in iyada deynteeda.
La taliyayaasha safarka iyo asxaabta saaxibada waxaa lagu casuumay inay ku biiriyaan fikradaha iyo xusuusta Gordy Jar xusuusta sandals oo ay aasaaseen Gordy saaxiibkiisii ​​mudada dheer iyo saaxiibkii UVI, Maura Cecere at [emailka waa la ilaaliyay] .